'Refugees International': 'Mootummaan Itoophiyaa buqqaatota dirqiin qe'eetti deebisaa jira' - BBC News Afaan Oromoo
'Refugees International': 'Mootummaan Itoophiyaa buqqaatota dirqiin qe'eetti deebisaa jira'
Mootummaan Itoophiyaa namoota sababa walitti bu'iinsaan qe'ee irraa buqqa'an dirqiin gara lafa irraa buqqa'aniitti deebisaa jira jedhe dhaabbati qarqaarsaa 'Refugees International' gabaasa baaseen.
Buqqaatonni hedduun sababa walitti bu'iinsa hamaa ta'een kan buqqa'anidha kan jedhe gabaasichi bakki itti gandi guutuun abiddaan barbadaa'e jiraachullee ni hima.
Kuni ta'ee osoo jiru mootummaan qe'ee irraa buqqaatanitti deebitan malee gargaarsa hin argattan jedhee buqqaatota kaampii keessaa dirqiin baasaa jira jedha gabaasichi.
Kun ammoo sarbama mirga namoomaa guddaadhas jedheera. Tarkaanfiin mootummaa kun rakkinicha caalaatti hammeessaa jiraachus ereera.
Namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'an hedduun manni isaanii waan barbadaa'eef qe'ee isaanii durii ta'us kaampii lammataa keessa jiraachuuf dirqamaniiru jedha.
Mootummaan Itoophiyaa imaammata buqqaatota biyyoota biroof qabuun leellifamaa ture, ni malaafis kan jedhe 'Refugees International', haalli itti lammileesaa biyya keessatti buqqa'an qabaa jiru garuu 'kan nama qaanessuu fi dhala namaaf hin malledha' jedha.
'Refugees International' fulbaana darbe garee tokko gara Kibba Itoophiyaa erga ergeen booda taajjabii isaaniirratti hundaa'uuni gabaasa kana kan baase.
Mootummaan Itoophiyaa garuu namooti qe'ee irraa buqqa'an fedhii isaaniifi bifa kabajaa qabuun deebi'aa jiru jedha.
"Hojiin buqqaatota bakka irraa buqqa'anitti deebisuu akkaataa ulaagaa idil-addunyaa eegeen, bakka deebi'anitti wabii nageenyaa haala argataniini" jedhu dubbi himtuun waajjira Ministira Muummee aadde Billanee Siyyuum.
Buqqaatonni bakka itti deebi'anitti misoommawwan bu'uraa akka argatanis hojjetamaa jiraachuu eeran ibsa torbee tokko dura gaazexeessitootaaf kennaniin.
Akka aadde Billaneen jedhanitti erga bara 2015 as lammiileen sabbaboota garagaraatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an miiliyoona lamaafi kuma 300 keessaa namoonni kuma 875 qe'ee isaaniitti deebi'aniiru.
Yeroo ammaas namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen hafan hojiin gara qe'ee isaaniitti deebisuu bal'inaan hojjetamaa jira jedhu.
Gabaasa addunyaa namoota biyya keessatti buqqa'anii ykn 'Global IDP report' kan bara 2019 dhaabbati 'Internal Displacement Monitoring Centre' jedhamu baaseen Itoophiyaan buqqaatota miliyoona 2.9 qabaachuun sadarkaa duraa irra jirti.
Namoonni kunneen walitti bu'iinsa sababoota gara garaan kutaalee biyyattii adda addaarraa buqqa'anidha.